बाङ्गो टिङ्गो दांत र अर्थोडोन्टिक उपचार • nepalhealthnews.com
बाङ्गो टिङ्गो दांत र अर्थोडोन्टिक उपचार
डा. दशरथ काफ्ले, बि.डि.एस, एम. डि. एस, धुलिखेल अस्पताल || प्रकाशित मिति :2018-09-14 06:36:05
प्रत्यक मानिसलाई आफु राम्रो अनि आकर्षक देखिन मन लाग्छ र त्यो स्वाविक पनि हो । मानिसको ब्यत्तित्व विकासमा शरीरको सुन्दरताले ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ । सुन्दर दांत भए सुनमा सुगन्ध हुने गर्दछ । तर कहिले काँहि आकर्षक अनुहारको सुन्दरतालाई नमिलेका दांतहरुले ओझेलोमा परिरहेको हुुन्छ । जव दुइजना मानिसको भेट हुन्छ तब उनिहरु पहिले आँखामा हेर्ने गर्दछन् र त्यसपछि दोस्रो नजर दांतमा पर्ने गर्दछ । विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानका अनुुसार बांगो टिङ्गो दांत हुनेहरुको आत्मविश्वास मिलेको दांत हुनेको भन्दा निकै कम हुन्छ । हालसालै कोरियामा किशोर अवस्थाका महिलाहरुमा गरिएको अनुसन्धानमा यो भेटिएको छ कि बिग्रेको दात मिलाई सकेपछि उनिहरुको आत्मविश्वास धेरै नै बढेको पाइएको छ ।
दांत बाङ्गो हुने कारण
बंगराको विकासमा हुने समस्या
गर्भावस्थामा हुने समस्या जस्तैः शारीरिक आघात, पौष्टिक आहारको कमि तथा संक्रमण
शिशु जन्मेपछि सन्तुलित आहारको कमि
शिशु अवस्थामा देखिने हानिकारक बानि जस्तै ः औँला चुस्ने, नङ् तथा ओठ टोक्ने, मुखबाट सास फेर्ने, जिब्रोले तालु ठेल्ने इत्यादि
दांतको संख्या कम या बढि हुने
दांतको आकार तथा प्रकारमा हेरफेर
दांत बाङ्गोे टिङ्गो हुने विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । ति मध्ये कतिपय कारणहरुलाई हामीले रोकथाम गर्न सकिन्छ भने कति हाम्रो बसमा हुदैन । यदि बेलैमा दांत बाङ्गोे टिङ्गो हुनबाट रोकिएको खण्डमा निम्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
अनुहारको सुन्दरतामा कमि
गिंजा पाक्ने रोगको समस्या
दांतमा किरा लाग्ने समस्या
भनिन्छ , रोग लाग्नु भन्दा रोगलाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो । मानव शरीरमा हुने अनेकौँ स्वास्थ्य समस्या जस्तै दांत बाङ्गो हुन बाट रोक्ने पनि उपाय छ । तर पनि हाम्रो समाजमा विरामीहरु दांत बाङ्गो भए पछि मात्र नै डाक्टरमा जाने प्रचलन छ । धेरै मानिसलाई दांत बाङ्गो भएमा उपचार गर्न र रोक्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नै छैन ।
दांत बाङ्गोे टिङ्गो हुन नदिन अपनाउन सकिने सरल उपायहरु
सन्तलित आहारको सेवन, गुलियो खानेकुरा कम सेवन गर्ने
नियमित दंत परिक्षण र नियमित रुपमा दातको सरसफाइ गर्ने
औँला चुस्ने, नङ् तथा ओठ टोक्ने, मुखबाट सास फेर्ने, जिब्रोले तालु ठेल्ने बानिहरु देखेमा बेलैमा बन्द गर्ने
दांतमा किरा लागेको छ भने बेलैमा उपचार गर्ने
दुधे दांतलाई राम्रो हेरचाह गर्ने र समय पुगेपछि मात्र निकाल्ने
कुनै कारणबस समय नपुगि निकासलिएको दुधे दांत छ भने तिनिहरुको ठाउँमा स्पेस मेन्टेनर लगाउने
बाङ्गोे टिङ्गो दांतको उपचारको लागि दांतामा तार बाध्नुपर्ने हुन्छ । यो उपचारलाई ब्रेसेस अथवा अर्थोडोन्टिक उपचार पनि भनिन्छ । दांतमा बाँधिने तारहरु विभिन्न किसिमको हुन्छन । बाङ्गोे टिङ्गो दातको प्रकृति हेरेर तारको प्रकार छानिन्छ । दांत थोरै मिलाउनु पर्ने छ अथवा सरल किसिमको दांतको मुभमेन्ट गर्नु छ भने निकाल्न मिल्ने तार रिमुभल ब्रेुसेस लगाउन सकिन्छ । यदि जटिल उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने निकाल्न नमिल्ने तार फिक्स ब्रेसेस लगाउनु पर्छ । यसलाई डाक्टरले लगादिने र समय समयमा एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञानको आविष्कार संगसंगै अर्थोडोन्टिक क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय विकास भएको छ । अचेत दांतको रंगका ब्रेसेस का सुविधाहरु विभिन्न अस्पताल एवंम् क्लिनिकलहरुबाट उपलब्ध भइरहेका छन । केहि वर्ष पहिले सम्म पनि नेपालमा संभरान्त वर्गको उपचार ठानिने दांतमा तार बाध्ने उृपचार अहिले सामान्य मानिसको पहुंचमा आइपुगेको छ ।